အမျိုးသမီးများအတွက် High Heel Chunky Camel Brown ရှူးဖိနပ်အတို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်များ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
အမျိုးသမီး ၀ တ်အမြင့်ဒေါက်ဖိနပ်သားရေ Camel Brown ဘောင်းဘီတိုတို
$48.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $61.99
ဖိနပ်ဆိုဒ် 35 36 37 38 39 40
ကုလားအုတ်အညိုရောင် / 35 ကုလားအုတ်အညိုရောင် / 36 ကုလားအုတ်အညိုရောင် / 37 ကုလားအုတ်အညိုရောင် / 38 ကုလားအုတ်အညိုရောင် / 39 ကုလားအုတ်အညိုရောင် / 40
အမျိုးသမီး ၀ တ်အမြင့်ဒေါက်ဖိနပ်အသားကပ် Camel Brown ဘောင်းဘီတို - ကုလားအညိုရောင် / 35 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
35 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
တစ်လနီးပါးကြာခဲ့တယ်။ ခြေဘ ၀ ၏အရွယ်အစားတွင် ၂၅ စင်တီမီတာအရွယ်ရှိသည့်တင်းကျပ်သောခြေအိတ်ပေါ်၌ကောင်းမွန်စွာမချဉ်းကပ်လျှင်ခြေထောက်ကျဉ်းသည်။ ဓာတ်လှေကားရှိရင်ခြေထောက်ဖြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍: ရှေ့တွင်သင်ကော်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ချုပ်ရိုးနောက်ကွယ်မှအားနည်းသောခြစ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအရာအားလုံးပုံမှန်ပါပဲ။ ငါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ် ပုံစံကအဆင်ပြေတယ်။
Awesome! အဆင်ပြေ! ဖိနပ်လိုပဲ စက်ချုပ်၏အရည်အသွေးသည်ပြီးပြည့်စုံသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် z * ra ၌အလားတူပစ္စည်းများကိုမယူခဲ့ခြင်းနှင့်ယင်းတို့ကိုမစွန့်စားခဲ့ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ကျေနပ်သည်။ ယခုပင်လျှင်သူတို့အားဆောင်း ဦး ရာသီ၏ကြမ်းပြင် left နှင့်သာပြန်လည်သုံးသပ်အပေါ်ရင့်ကျက်)
37 အရွယ်မှာperfectlyုံမထိုက်မတန်မှာ။ အလွန်အဆင်ပြေ။ ပို့မည့်လ
အားလုံး OK ။ တစ်လခန့်ပေးပို့။ ကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာမဝတ်သေးဘူး အမှတ်အသားများ (Tags) z * Ra ။ ရုရှားအရွယ်အစား 35-36